Mahjong ။ ulator Emulator.online မှ ဝင်၍ ပျော်မွေ့ပါ
Mahjong ။ MahJong သည်အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာလိုအပ်သောထောက်လှမ်းရေးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဉာဏ်ပညာနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုဖြစ်၏။ Mah Jong ကစားရန်၊ အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်အောင်မြင်သူကြီးဖြစ်ရန်သင်ယူပါ။
ကစားရန် Mahjong အွန်လိုင်းအခမဲ့, သင်ရုံရန်ရှိသည် ဤညွှန်ကြားချက်များကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လိုက်နာပါ:
ခြေလှမ်း 2။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်သည်နှင့်ဂိမ်းကိုဖန်သားပြင်တွင်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ သင်သာရန်ရှိသည် play ကိုနှိပ်ပါ ယခုသင်သည်ထိုသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်တူညီသောအပိုင်းအစများကစားစတင်နိုင်ပါသည်။
3 အဆင့်။ ဒီမှာအသုံးဝင်တဲ့ခလုတ်အချို့ရှိတယ်။ လုပ်နိုင်အသံထည့်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပါ", ထို" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါကစား"ကစားနိုင်ပြီ၊ ကစားနိုင်ပြီ"ခေတ္တရပ်နားသည်"ရပ်တန့်ပြီးမေးပါ"အကူအညီ"or"ပြန်လည်စတင်ပါအချိန်မရွေး
4 အဆင့်။ ဂိမ်းပြီးဆုံးသည်အထိအားလုံးအားလုံးအတွက်ဖယ်ရှားပါအမြဲတမ်းဂိမ်း၏စည်းကမ်းချက်များကိုသတိရ။ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏အမည်ကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်လိမ့်မည် လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်မျှဝေပါ သင်ဂိမ်းပြီးအောင်တစ်ကြိမ်။
5 အဆင့်။ ဂိမ်းပြီးပါကကိုနှိပ်ပါ "ဂိမ်းများ" အခြားမြေပုံများတွင်ကစားရန်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ တရားဝင် Mahjong နည်းဥပဒေများ သင်သိလိုလျှင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားဝင်စည်းမျဉ်း ဒီလူကြိုက်များဂိမ်း၏။
Mah Jong ဟာညတရုတ်ဇာစ်မြစ်အားကစားသမားလေးယောက်မှကစားသောကစားနည်းဖြစ်ပြီးယနေ့တွင်အပျော်ရွှင်ဆုံးနှင့်တန်ဖိုးအထားဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တွက်ချက်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်မဟာဗျူဟာတို့၏ကစားနည်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်းနှင့်ဆင်တူသည် ဒိုမီနို.
ဒီဂိမ်းမှာရှိတယ် ၁၄၄ ခုနှင့်ယင်းတွင်တိကျသောတရုတ်စာလုံးများနှင့်သင်္ကေတများရှိသည်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ်၏သဘောပေါက်ခွင့်ပြုထားတဲ့။ သို့သော်ကွဲပြားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသောဒေသဆိုင်ရာမူကွဲအချို့ရှိသည်။
ဂိမ်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအနည်းဆုံးရမှတ်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့်တရားဝင်လက်ကိုပထမဆုံးဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်သည်။ လက်၏တန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်း၏အခက်အခဲကြောင့်ဖြစ်သည်။
Mahjong ဂိမ်း၏သမိုင်းသည်ကျွမ်းကျင်သူများအကြားအငြင်းပွားဖွယ်အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ တချို့ကအဲဒီလိုရှိတယ်ဆိုပါစို့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်နှင့်အခြားသူများကမူ ၁၈ ရာစုသို့မဟုတ် ၁၉ ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ ၁၉ ရာစုမတိုင်မှီတွင်သမိုင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများမရှိပါ။
တရုတ်ဒဏ္legာရီအရတရုတ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ကွန်ဖြူးရှပ် သူကဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း၏တီထွင်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းအတွက်သိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားမရှိပါ။ ၎င်းသည်အောက်ပါအကြောင်းအရာပါဒဏ္orာရီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဒဏ္myာရီသာဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်ကအလွန်အထီးကျန်နေသောလှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ဘုရင်ဝူ၏နန်းတော်တွင်နေထိုင်သည်။ ငါသေလုနီးပါးပျင်းခဲ့သည်။ တစ်နေ့တွင်သူသည် ၀ ါးနှင့်ဆင်စွယ်များမှဒိုမီနိုကျောက်များနှင့်ဆင်တူသည့်ကိန်းဂဏန်းများကိုထွင်းထုခဲ့သည်။ သူပြီးဆုံးသွားသောအခါအိမ်ဖော်များကိုခေါ်လာခဲ့သည်။ ကွန်ဖြူးရှပ်သည်ဤဂိမ်းကိုထပ်မံတီထွင်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။
တရုတ်ဘာသာမှ "Mahjong" နှင့် "ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်" ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။စာငှက်သည်စကားပြောခြင်း၊ဒဏ္legာရီအရဘုတ်အဖွဲ့ကဒီနာမည်ကိုရခဲ့တယ် ကွန်ဖြူးရှပ်သည်ငှက်အမျိုးမျိုးကိုကြိုက်ခဲ့သည်။ စကားမစပ်, nobility သာဂိမ်းကစားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ သာမန်လူများကကစားခဲ့လျှင်သူတို့သည်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေကြသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သမိုင်းပညာရှင်များက Mahjong ဂိမ်းကိုယုံကြည်ကြသည် ၁၀ ရာစုနှင့် ၁၁ ရာစုနှစ်များတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သောရှေးဟောင်းတရုတ်ကဒ်ဂိမ်းများမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကဂိမ်း၏မူလအစ၏တည်နေရာကိုမှခြေရာခံ ရှန်ဟိုင်း၊ အန်းဝေနှင့်ကီဆန်ထိုကဲ့သို့သောကဒ်ဂိမ်း၏သက်သေအထောက်အထားများကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်အဖြစ်။
ပုံမှန်အစုံပါဝင်ပါသည် 136 သို့မဟုတ် 144 ကိုအပိုင်းပိုင်း။ Mahjong အစုံအလင်ကိုအမျိုးအစားခွဲခြားသည်။
Mahjong ကိုကစားနေတုန်းပဲ ရိုးရာဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း။ သို့သော်အွန်လိုင်းဂိမ်းများသည်လူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှ Mahjong ၏မတူညီသောဗားရှင်းများသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မကြာခဏပေါ်လာသည်။
ယနေ့တွင်၎င်း၏အွန်လိုင်းဗားရှင်းရှိဘုတ်အဖွဲ့သည်လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုပင်ဖြစ်ပြီး Flash ဂိမ်းတစ်ခုအနေနှင့်၎င်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်အခမဲ့ပေးသည်။ ဒါသူ Mahjong ဂိမ်း အမျိုးမျိုးသောအမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးမျိုးသောကစားနည်းများတွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင်ရိုးရာဂိမ်း၏လူကြိုက်အများဆုံးဗားရှင်းများမှာ -
ဂိမ်း၏အခြေခံနိယာမဖြစ်သည် အားလုံးအပိုင်းပိုင်းမဆိုပေးထားသောအချိန်တွင်အားလုံးအတွက်အတွက်ရှင်းလင်းရမည်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရမှာကတော့ ကိုက်ညီတဲ့ pair တစုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ (တူညီ motifs) ။ သို့သော်၊ အခြားကျောက်တုံးများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းမရှိပါကကျောက်များကိုသာဖယ်ရှားနိုင်သည်။
သင်အနည်းဆုံးတစ်ဖက်၌အခမဲ့ထားခဲ့ရမည်။ ကျောက်တုံးများတွေ့ရှိပုံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အရာ၊ ကစားပွဲကပြီးပြီ။ ဒီဂိမ်းကိုမောက်စ်ဖြင့်ရိုးရှင်းစွာထိန်းချုပ်ထားသည်။
Mahjong ဂိမ်း၏အထူးအားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်ယုတ္တိရှိသောအတွေးအခေါ်ကိုသာမက၊ အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်မှတ်မိနိုင်စွမ်း.
ကွဲပြားခြားနားသော Mahjong ၏မျိုးကွဲ
မှတ်တမ်းများအရတရုတ်ကုန်သည်များသည်ဂိမ်းကိုအနောက်နိုင်ငံများသို့ယူဆောင်လာသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းများနှင့်ဂိမ်းကစားနည်းများကိုဤနေရာတွင်တီထွင်ခဲ့သည်။ လက္ကား JP Babock သူကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရိုးရှင်းအောင်လုပ်ချင်ခဲ့တယ်။Mah-Jong အတွက်စည်းကမ်းများရလဒ်ကတော့ Mahjong ကပိုပြီးလူကြိုက်များလာတယ်။
အမေရိကန်၏ Mahjong ဗားရှင်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးမူလမူကွဲနှင့်များစွာကွာခြားသည်။ သက်ဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှု၏စည်းမျဉ်းများကိုဂျပန်သို့မဟုတ်ဂရိတ်ဗြိတိန်ကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများတွင်လည်းလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ဂိမ်း၏ဟောင်ကောင်နှင့်ကန်တိုဗားရှင်းကိုယနေ့ ပိုမို၍ မကြာခဏကစားသည်။
ယနေ့ Mahjong အမျိုးအစားများ🀧
ဟောင်ကောင် Mhjong သို့မဟုတ် Cantonese Mahjong 🀄
ဂိမ်း၏အသုံးအများဆုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ် ဟောင်ကောင် Mhjong သို့မဟုတ် Cantonese Mahjong။ အွန်လိုင်းလောင်းကစားခန်းမများတီထွင်မှုဖြင့်ဂျပန်သည်လောင်းကစားခြင်းကိုသူ၏ခန်းမများသို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးကစားသမားများကိုခွင့်ပြုခဲ့သည် ကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများမှအခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ၎င်းသည်ဂိမ်းကို ပို၍ လူကြိုက်များစေပြီးနာမည်ကျော်ဂိမ်း၏မူကွဲအသစ်များကိုထပ်မံဖြန့်ချိခဲ့သည်။
စပ်စု ဂိမ်း၏မူရင်းတရုတ်ဗားရှင်းကိုတရုတ်တွင်မကစားတော့ပါ။ အနည်းငယ်သာရှိပါသည် အနောက်နိုင်ငံများတွင်သစ္စာရှိနောက်လိုက်အနည်းငယ်သာ
တရုတ်နိုင်ငံတွင်သာမကဟောင်ကောင်သာမကပြုပြင်ထားသောဂိမ်း၏မူကွဲသည်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ အခြားသူများ ၁၉၃၀ လွန်နှစ်များ မှစ၍ အပြောင်းအလဲများသည် Mahjong ကိုလူကြိုက်များသောလောင်းကစားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ အခြားအခွင့်အလမ်းဂိမ်းများနှင့်မတူဘဲ, လူတစ်ယောက်ဟာကံကောင်းလို့ Mahjong ဂိမ်းကိုမရနိုင်ဘူး။
ဂိမ်းလိုအပ်ပါတယ် အောင်မြင်မှုရရန်အခြားကစားသမားများ၏နည်းဗျူဟာ၊ မြန်နှုန်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။ ဤသည် Mahjong သည်အခြားဂိမ်းများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနှင့်ပိုမိုပညာရှိသောအခြေအနေကိုအာမခံသည်။
Mahjong နဲ့ကွာခြားချက်ကတော့သင်ကစားနိုင်တာပါ။ Mahjong မာစတာဖြစ်လာရန်သင်တူညီသောအုပ်ကြွပ်အားလုံးကိုဖယ်ရှားရမည်။ သင်၏အလုပ်မှာရမှတ်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်အပိုင်းများကိုရှာဖွေပြီးဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်သည် အပေါ်ဆုံးနှင့်အပြင်ဘက်အလွှာများမှ စတင်၍ ဗဟိုဆီသို့ ဦး တည်ပါ။ ခိုင်လုံသောရွေ့လျားမှုမရှိပါကစတင်ပါ!
တရားဝင် Mahjong နည်းဥပဒေများ
Mah Jong ကိုမှန်ကန်စွာကစားနိုင်ဖို့အတွက်သင်ဟာသူ့ရဲ့အဓိကအယူအဆတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတရားဝင် Mahjong စည်းမျဉ်းများ။ ဤဆောင်းပါးပါအချက်အလက်များကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Mahjong စည်းမျဉ်းများမှထုတ်ယူထားသည်။
စားပွဲ ၁ ခု
144 သို့မဟုတ် 136 Mahjong ကျောက်များ
Mah Jong သည်ဂိမ်းတစ်ခုပါ ၀ င်သည် 144 အပိုင်းပိုင်း။ ၎င်းတို့အားလုံးတွင်တရုတ်စာလုံးများနှင့်သင်္ကေတများစွာရှိသည်။ Mah Jong ဂိမ်းပါသောအပိုင်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ပုံမှန်အုပ်ကြွပ်များကို ၁ မှ ၉ အထိရေတွက်ပြီးအလှည့် ၃ ခုခွဲထားသည်။
ကဒ်တစ်ခုချင်းစီတွင်တူညီသောလေးခုရှိသည် (ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဥပမာအားဖြင့်ဇာတ်ကောင်သုံးယောက်မှကဒ်လေးခု) ရှိသည်။ သာမန်တိုကင်များကိုအခြားအမည်များဖြင့်လည်းခေါ်ဆိုသည်။
ချစ်ပ်ရန် တစ် y ကိုး ဝတ်စုံတစ်ခုစီ၏ (၁ နှင့် ၉) ကိုလည်းခေါ်သည်။ဆိပ်ကမ်းများ".
အကြားချစ်ပ်ရန် နှစ် နှင့် ရှစ် တစ်ခုချင်းစီ၏ (၂-၈) ကို "လူတိုင်း" ဟုလူသိများသည်။ရိုးရှင်းသော".
ပန်းနှင့်ပန်းပွင့်တိုကင်များကိုသင်ထွက်ခွာသည်နှင့်ပြသရမည်။ ၎င်းတို့သည်အချို့သောရမှတ်များသာရရှိရန်နှင့်အခြားအမှတ်အသားတစ်ခုထပ်ယူရန်အသုံးပြုသည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်ဂိမ်းကိုယ်နှိုက်ကိုအလွန်အမင်းမထိခိုက်ပါ။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကို "bonus chips" ဟုလည်းခေါ်သည်။
Mahjong စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ပန်းနဲ့ရာသီဥတုအရွက်တွေကိုထည့်မစဉ်းစားဘူး၊ ဂိမ်းထဲကနေဖယ်ထုတ်ပေးတယ်။
လေအရှေ့၊ တောင်၊ အနောက်နှင့်မြောက်ဘက်မှဖြစ်သည်။
ပုံမှန်တိုကင်များကဲ့သို့ပင်ဂုဏ်ပုဒ်တိုကင်တစ်ခုချင်းစီကိုလေးကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သည် (ဥပမာ - တောင်လေတိုကင် ၄ ခု) ။
နောက်ဆုံးတော့ပန်းပွင့်နဲ့ရာသီဥတုကအကြွပ် ၈ ပြားအထိထည့်ထားတယ်။
လေး ပန်းပွင့်၄ င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အပြာသို့မဟုတ်အဖြူရောင်ဖြင့်ပုံသဏ္ogramာန်ရှိသည်၊ အနီရောင်ဖြင့်ရေတွက်သည်။
လေး ရာသီ၄ င်းတို့သည်အမြဲတစေအနီရောင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသောအစက်များနှင့်အပြာသို့မဟုတ်အနက်ရောင်များဖြင့်ရေတွက်သည်။
ပန်းများနှင့်ရာသီဥတုများသည်လေနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပြီးလေတစ်ခုချင်းစီနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုကြေးအဖြစ်တိုကင်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
La ပန်း 1 နှင့် ဘူတာ 1, လေနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည် Este.
ပန်း2နှင့် ဘူတာ 2လေနှင့်အတူ အပေါ်.
ငါတို့ပန်းပွင့်အကြောင်းပြောတဲ့အခါ ပန်း3နှင့် ဘူတာ 3လေနှင့်အတူ အနောက်.
La ပန်း4နှင့် ဘူတာ 4လေနှင့်အတူ မွောကျ.
ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖြစ်ပါသည် ရနိုင်သမျှများများရယူပါ "Making Mahjong" အတွက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Mahjong ကို RCM တွင်လုပ်ရန်လိုသည် 8 အချက်များ အနည်းဆုံး (ပန်းပွင့် / ရာသီအမှတ်များမပါရှိ) သောကြောင့်သင်လှုပ်ရှားမှုများကိုကောင်းစွာသိရှိထားရမည်။
Mahjong ၏ပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းတွင်လက် (သို့) ဂိမ်း ၁၆ မျိုးဖြင့်အလှည့်ကျခွဲထားသည်။4ဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီ၏4ကြိမ်။
အပြည့်အဝဂိမ်း 16 လက်သို့မဟုတ်ဂိမ်းများဖြစ်သော်လည်းပြိုင်ပွဲအများစုအတွက်ကအချိန်အားဖြင့်ကစားသည်။ အများအားဖြင့် ဂိမ်းများကိုမိနစ် 90 သို့မဟုတ်2နာရီဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။
1st ပတ်ပတ်လည်: အရှေ့လေ
2nd ပတ်ပတ်လည်: တောင်လေ
3st ပတ်ပတ်လည်: အနောက်လေ
4st ပတ်ပတ်လည်: မြောက်လေ
တစ်ခုချင်းစီကိုလှည့်လည်၏လေတိုက်နှုန်း, တိုက်ရိုက်ရမှတ်သာဂိမ်းကိုထိခိုက်ပါဘူး။ တစ်ခုချင်းစီကိုလှည့်လည်၏အဆုံးမှာတစ် ထိုင်ခုံ၏ပြောင်းလဲမှု.
တစ်ခုချင်းစီကိုလေတိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အနေအထားသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့ဘက်တွင်တောင်ဘက်၌ညာဘက်၊ အနောက်ဘက်တွင်မြောက်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်တွင်ရှေ့တန်းရှိသင့်သည်။
သူ့ကိုထိသောလေပေါ် မူတည်၍ ကစားသမားတစ် ဦး စီသည်ထိုအနေအထားနှင့်အညီထိုင်ရမည်။ လေများဖြန့်ဝေခြင်းကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်၊ သို့သော်အရိုးရှင်းဆုံးမှာ -
ကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီကိုအန်စာတုံးခတ်ခြင်းနှင့်နံပါတ်များကိုလေတိုက်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း (၁ = အရှေ့၊ ၂ = တောင်၊ ၃ = အနောက်၊ ၄ = မြောက်နှင့် ၅,1 = နောက်ထပ်လှည့်ပါ) ။
လေတစ်ခုစီကိုတစ်ပိုင်းစီချပြီးကစားသမားတစ် ဦး စီသည်အပိုင်းအစတစ်ခုကိုရွေးချယ်သည်။
နံရံကနေပါဝင်တယ် ၃ လုပ်ကွက် de2တိုကင် မြင့်မားသောတစ်စတုရန်းဖွဲ့စည်းနှင့်ဂိမ်းထဲမှာတစ် ဦး ချင်းစီလက်ရဲ့ start မှာတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီသည်နံရံ ၁၈ ခုနှင့်အမြင့် ၂ ချပ်လုံးကိုအတူတကွစုပေါင်းခြင်းဖြင့်နံရံ၏အစိတ်အပိုင်းကိုပြုလုပ်ရမည်။
ကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီသည်နံရံ၏နံရံကိုတည်ဆောက်ပြီးပါကရလဒ်သည် ၁၈ ကွက် x ၁၈ လုပ်ကွက်စတုရန်းဖြစ်သင့်သည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ကစားသမား Este စတင်လိမ့်မည် နှစ်ခုအန်စာတုံးချစ်ပ်များဖြန့်ဖြူးမှုစတင်မည့်နံရံ၏နံဘေးကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။
ဖြန့်ဖြူးမှုစတင်သောနံရံ၏အစိတ်အပိုင်းကိုသိရန်၎င်းသည်ဂိမ်း၏အစဉ်အတိုင်း (အရှေ့ဘက်မှစတင်ကာ) နာရီကိုတွက်ချက်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အန်စာတုံးဖြင့် ၅ သို့မဟုတ် ၉ ကိုလှိမ့်လျှင်တောင်ဘက်ခြမ်းတွင် ၂၊ ၆ သို့မဟုတ် ၁၀ ကိုလှိမ့်လျှင်စသည်ဖြင့်အရှေ့ဘက်နံရံတွင်စတင်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာတွင်အရှေ့ကစားသမားသည် ၆ နှင့် ၅ ကိုလှိမ့်လိုက်ပြီးအနောက်ဘက်ကစားသမားဘက် (6 +5= 6) နံရံကိုဖွင့်လိမ့်မည်ကိုပြသည်။
အနားယူမည့်အရံနံရံမတိုင်မီကကစားသမားသည်အခြားသူများကိုရိုက်ကူးရန်တာဝန်ရှိသည် ၂ အန်စာတုံး ၎င်းသည်နံရံများဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်ကြွေပြားများ (ဆိုလိုသည်မှာကြွေပြားများသိမ်းယူမည့်နေရာ) ကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။ ငါတို့သာဓကမှာအနောက်ကစားသမားဖြစ်တယ်။
ချစ်ပ်များဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုကစားသမားတစ် ဦး စီကမိမိ၏ချစ်ပ်များကိုပိတ်ပင်ထားသည်။
စတင်မည့်ပိတ်ဆို့မှုသည်လှိမ့်ထားသောအန်စာတုံးလေးခု (နံပါတ် ၂ ခုကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းမှရသောနံရံ၏ဘေးထွက်ကိုသိရန်နှင့်အခြားအန်စာတုံး ၂ ခုကိုသိရန်) ၏ပေါင်းလဒ်အရေအတွက်နှင့်နောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စတယ် လက်ျာမှလက်ဝဲမှရေတွက် ပထမ ဦး ဆုံးအန်စာတုံး (၂) ခုမှနံရံ၏ဘေးဘက်တွင် (၎င်းကိုဖွင့်လှစ်သောနံရံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကစားသမား၏ရှုထောင့်မှကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်အနောက်ကစားသမား) ။ သူယူသည် လာမည့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု လုပ်ကွက်4အန်စာတုံးကိုထည့်ပါ။
မှတ်စု: အန်စာတုံး (၄) ခုပေါင်းခြင်းသည် (၁၈) ထက်ကြီးသည် (ထိုနံရံ၏အခြမ်း၏အကျယ်ဖြစ်သည်) ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ထိုကိစ္စတွင်အန်စာတုံး၏ပမာဏကိုမရောက်မှီနံရံ၏နောက်ဘက်ခြမ်းရှိပထမအုတ်မြစ်ကိုရေတွက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာတွင်အနောက်သည်နောက်ထပ်အန်စာတုံး (၂) ခုချပစ်လိုက်ပြီး (၄) နှင့် (၅) ကိုလှိမ့်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်2(4 +5+ 20 +6= 5) သည်အောက်ပါပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အနောက်နံရံရှိနံပါတ် ၂၀ မှနံရံ ၂၀ မှနံရံ ၂၀ မှကြွေပြားများကို စတင်၍ အနောက်ကစားသမားဘက်ခြမ်းရှိပထမဘောင်မှညာဘက်သို့ (အနောက်အနောက်ကစားသမားရှုထောင့်မှ) ရေတွက်သည်။
ဖြန့်ဖြူးရေး tile မစတင်မီ tile သည်နံရံပေါ်ရှိနောက်ဆုံး tile ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာတွင်၊ နောက်ဆုံး tile သည် block 20 (အပြာရောင်ဖြင့်) ၏အပေါ်ဆုံး tile ဖြစ်ပြီး၊ tiles များယူထားသည့် block သည်အနီရောင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖြစ်သည်။
RCM မှာမရှိဘူး သေပြီနံရံ.
အရှေ့ကစားသမားသည် (တိုကင်စုစုပေါင်း (၄) လုံး) မှပထမဆုံးတိုကင်ပြားနှစ်ခုကိုယူလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအမှတ်အသားပါသောပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုများသောအားဖြင့်နံရံ၏အခြမ်းသည်အဆုံးဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းညွှန်ပြရန်လှည့်သည် (သို့သော်မလိုအပ်ပါ) ။ ဤပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုမည်သည့်ကစားသမားမဆိုပြောင်းလဲနိုင်သည် (များသောအားဖြင့်ဒီကစားကွက်ရှေ့တွင်ကစားသမားသို့မဟုတ်အရှေ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်) ။
နောက်ပိုင်းတွင်အရှေ့ကစားသမားအားနောက်ထပ်လုပ်ကွက် (၂) ခုပေးလိမ့်မည်။
ဒီတော့ကစားသမားတစ်ယောက်စီသည် ၄ ​​ချပ် (၄) ချပ်ကိုယူသည်အထိကစားသမားတစ် ဦး စီသည်စုစုပေါင်း (၁၂) လုံးစီရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်အရှေ့ကစားသမားသည် (၂) ချပ် (အနီရောင်ဖြင့်မှတ်သားထားသည့်ထိပ်တန်းအုပ်ကြွပ်များ) ကိုယူလိမ့်မည်။
ပြီးတော့တောင်ပိုင်း၊ အနောက်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကစားသမားတွေကတစ် ဦး ချင်းစီကိုအမှတ်အသားတစ်ခုစီယူကြလိမ့်မယ်။
အပေးအယူအပြီးတွင်ကစားသမားတစ် ဦး စီတွင်အရှေ့ပိုင်း မှလွဲ၍ ၁၃ လုံးရှိမည်။ အရှေ့ရှိကစားသမားသည်သူသည်အရှေ့ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အန်စာတုံးကိုသူ၏ညာဘက်သို့တင်လိမ့်မည်။
El အဆိုပါချစ်ပ်များယူပြီးစတင်ဘယ်မှာမှပိတ်ဆို့ ၏ပေါင်းလဒ်ကိုညွှန်ပြသောအနေအထားတွင်တည်ရှိသောပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖြစ်ပါတယ် သုံးအန်စာတုံးမတိုင်မီလှိမ့်.
Se လက်ျာမှလက်ဝဲမှရေတွက် ထိုနံရံ၏နံဘေးရှိလူတစ် ဦး ၏ရှုထောင့်မှကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာတွင် Start block သည်ကစားသမား၏နံရံ၏မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင်လုပ်ကွက် ၁၂ ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်သင်သည်နံပါတ် ၁၂ မှနံရံမှကြွေပြားများကိုစတင်ယူသည်။ ၎င်းသည်ပုံ၏အနီရောင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖြစ်သည်။
သင် tiles များကိုစတင်ယူတော့မည့်နေရာမှသင်သိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဂိမ်းတစ်ခုလုံးတွင်ပုံမှန် tiles များခိုးယူရန်အသုံးမပြုနိုင်သည့် tiles အုပ်စုတစ်စုရှိသည်။ ဤတိုကင်များကိုခေါ်သည် သေပြီနံရံသူတို့ဖြစ်ကြသည် 14 တိုကင် အပိုချစ်ပ်များကိုသာယူရန် ((လုပ်ကွက် ၇ ခု) ဖြစ်သည်။
အမြဲ ဆက်နေရမည် 14 သေလွန်သောသူတို့သည်မြို့ရိုးတိုကင်။ ထို့ကြောင့်အပိုအစားထိုးအုပ်ကြွပ်များကိုယူသောအခါအုတ်နံရံသည်ရွေ့သွားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကစားပွဲပြီးဆုံးခြင်းမရှိပဲနံရံအသေကောင်ကိုရောက်ရှိပါကမည်သူကိုအနိုင်မရရှိပဲ (ဒီအခြေအနေကိုခေါ်သည်) null လက်).
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာတွင်၊ ၎င်းသည် home tile မှညာဘက်သို့ tile ၁၄ ခု (လုပ်ကွက် ၇) ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအပြာရောင်လုပ်ကွက်တွေပါ။
စတင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုတည်ထောင်ပြီးသည်နှင့်ချစ်ပ်သဘောတူညီမှုစတင်သည်။ အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းကစားသမားတစ် ဦး စီသည်၎င်းတို့၏တိုကင်တို့ကိုလုပ်သည်။
စတင်ခြင်းမပြုမီ Mahjong တွင်အခြေခံပေါင်းစပ်မှုများ (သို့) ရွေ့လျားမှု ၃ ခုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရရမည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုဖွဲ့စည်းရန်အတွက်အချို့သောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရမည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် 3- tile ကိုဖြောင့် ၏ဆက်တိုက် တူညီဝတ်စုံကို (Ojo, အတိအကျ3ချစ်ပ်,2သို့မဟုတ်4ချစ်ပ်များ၏လှေကား) ။
ခြွင်းချက်ဖြေ။ ။ Mahjong ကိုရဖို့ Chi ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ဘယ်ကစားသမားမှမလွှင့်ပစ်ဘူးတဲ့ကွက်လပ်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်။ (ဘယ်ဘက်မှာပြစရာမလိုပါဘူး)
ဒါဟာပေါင်းစပ်သည်3ကိုက်ညီအုပ်ကြွပ်.
ဒါဟာပေါင်းစပ်သည်4ကိုက်ညီအုပ်ကြွပ်.
သင်တစ် ဦး ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါလျှင် ဖုန် ပြီးတော့နံရံကနေ Pung နဲ့ဆင်တူတဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုဆွဲမယ်ဆိုရင်သင်က Pung ကိုချဲ့ထွင်ပြီးဟောင်ကောင်တစ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ (Ojo, သင်သည်အခြားကစားသမားရဲ့စွန့်ပစ်နှင့်အတူ Kong ဤပုံစံကိုမဖွဲ့စည်းနိုင်ပါ။ Pung နှင့်ထိတွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုသင်ရရှိသောလက္ခဏာသက်သေဖြင့် Kong သို့ချဲ့နိုင်သည်။
သင့်လက်၌ကိုက်ညီသောအချပ် ၄ ခုရှိပါက၎င်းတို့ကိုဟောင်ကောင်အဖြစ်ရေတွက်နိုင်ရန်သင်ပြရမည်။ သင်သည်အပိုင်းပိုင်း (၄) ခုကိုမျက်နှာဖုံးအောက်တွင် ထား၍ (ထိုအရာသည်ဘာလဲဆိုတာမသိဘဲဝှက်ထားလျက်) ၎င်းကိုဟောင်ကောင်အဖြစ်ကြေငြာရမည်။ တိုကင် ၄ ခုလက်ကိုကိုင်ထားပြီးတိုကင်များကိုသီဆိုသော်လည်းမပြသောဒီဟောင်ကောင်ကိုခေါ်သည် Hidden Kong.
ဒီဂိမ်းကအလှည့်ကျဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းတူညီတဲ့ ဦး တည်ချက် - နာရီလက်တံတစ်မျိုးတည်းမှာပဲလုပ်လေ့ရှိတယ်။ အရှေ့ - တောင် - အနောက် - အရှေ့ - အစရှိသည့်အတိုင်းလိုက်လုပ်ပါ။
ဒီဂိမ်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမြဲတမ်းနောက်ကိုလိုက်နေတယ်။ ကစားသမားကသူ့အလှည့်ကိုမရတဲ့ကစားသမားတစ် ဦး ကအခြားကစားသမားတစ်ယောက်က Pung, Kong ဒါမှမဟုတ် Mahjong ကိုထုတ်ပစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မှလွဲရင်
ထိုကိစ္စမျိုးတွင်အမှာစာပျက်နေပြီးထိုကစားသမားအတွက်ဂိမ်းဆက်လုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်းထိုကစားသမားမှကျွန်ုပ်တို့ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း ထပ်မံ၍ ကစားနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, အရှေ့ကစားသမားအနောက်ကစားသမားလိုချင်တဲ့လက္ခဏာသက်သေပစ်။ ထိုအခြေအနေတွင် (အဓိပ္ပာယ်ပျက်နေသည် (တောင်ပိုင်းကစားသမားအလှည့်ဖြစ်သင့်သည်)) နှင့်ဂိမ်းနောက်မှအနောက်ကစားသမားနောက်မှလိုက်လိမ့်မည်၊ သူသည်အငှားချပြီးနောက်ယူနိုက်တက်သည်သူ၏အုတ်ကြွပ်တစ်ချောင်းကိုပစ် ချ၍ မြောက်ကစားသမားကိုဆက်လက်ကစားလိမ့်မည်။ ။
တိုကင်ဖြန့်ဝေပြီးသည်နှင့်ကစားသမားတစ် ဦး စီ၏ပန်းနှင့်ဘူတာရုံတိုကင်များနှင့်ဖြစ်နိုင်သည့်ဟောင်ကောင်ကို (အမိန့်တစ်ခုအရ) ပြသရမည်။
ပန်းများနှင့်ရာသီများကိုပထမ ဦး ဆုံး၊ ထို့နောက်ဟောင်ကောင်ကိုပြသသည်။
အရှေ့ကစားသမားနှင့်စတင်ခြင်းနှင့်ကစားခြင်း၏လမ်းကြောင်း (အရှေ့ - တောင် - အနောက် - မြောက်) သို့ရွေ့လျားသူများသည်သူတို့၏ပန်းပွင့်ရာသီရာသီအမှတ်အသားများကိုကြေငြာပြီး၎င်းတို့ရှေ့နှင့်ညာဘက်သို့မျက်နှာမူ။ နေရာချကြသည်။
ပြထားတဲ့ပန်းပွင့်နှင့်ရာသီရာသီတိုကင်တစ်ခုစီအတွက်ကစားသမားတစ် ဦး စီသည်နံရံမှအမှတ်အသားအသစ်တစ်ခုယူသည်။
ပန်းပွင့် / ရာသီသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်အတွက်နံရံမှယူသောအပိုတိုကင်များကိုခေါ်သည် အစားထိုးသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ချစ်ပ်။ အစားထိုးချစ်ပ်ခြမ်းကနေယူနေကြသည် မြို့ရိုးအဆုံး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာမှာအပြာရောင်အရောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်။
အကယ်၍ ကြွေပြားအသစ်များသည်အခြား Flowers and Seasons tile ဖြစ်လျှင်၎င်းကိုပြလိမ့်မည်။ နံရံ၏အဆုံးမှအခြား tile ကိုလည်းယူလိမ့်မည်။
တာဝန်မရှိပါ ပန်းပွင့် / ရာသီကြွေပြားများနှင့်ဟောင်ကောင်များကိုချက်ချင်းမပြရန်ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းပြီးဆုံးခြင်းမရှိသေး သ၍ အချိန်မရွေး၎င်းတို့ကိုပြသနိုင်သည်။
အဆိုပါဂိမ်းသည်အရှေ့ကစားသမား (tile 14 ခု) ဖြင့်အစရှိသဖြင့်အရန်ကစားသမားများက ၁၃ နှင့်စတင်သည်။
ဂိမ်းသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအဓိပ္ပာယ်အရအမြဲတမ်းတီထွင်နိုင်ပြီးအလှည့်မရသည့်ကစားသမားသည် Pong, Kong သို့မဟုတ် Mahjong ကိုအလိုလိုက်သည့်အခါမှသာပြိုကွဲသွားသည်။ ထို့နောက်သူသည်ထိုကစားသမားအတွက်ထပ်တူဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ထပ်တူတူသည်။
ကစားသမားသည် Mahjong ကိုဖြစ်စေ၊ နံရံအုတ်များဖြစ်စေသည့်အခါတွင်အဆုံးသတ်သည်။
ကစားသမားတစ် ဦး သည် tile ကိုစွန့်ပစ်သည့်အခါတိုင်း၎င်းတို့သည်၎င်းကိုသူတို့၏အနေအထားရှေ့တွင်နေရာချရမည် (၎င်းသည်ကျန်ဂိမ်းများအတွက်ကျန်ရှိနေသေးသည်) ၆ ထပ်စီအစဉ်လိုက် (စားပွဲ၏အလယ်ပိုင်းတွင်ပထမတန်းနှင့်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်) အနီးအနားမှာ) ။
အဘယ်သူမျှမတိုကင်ထွက်ဟုခေါ်သည်။ အခြားကစားသမားများစွန့်ပစ်သောအပိုင်းအစများ၊ ပန်းများ၊ ဘူတာများ (သို့) Chi၊ Pung, Kong၊ ပန်း၊ Mahjong / Hu တို့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခြင်း) ကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းကိုသာအသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်ပြောနိုင်သည်။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်တိုကင်ကိုရယူလိုလျှင် (၎င်းယူနိုင်သည်) သူကအလှည့်မဟုတ်လျှင်တောင်မှဖယ်ထုတ်လိုက်သည်နှင့်ချက်ချင်းပြောရမည်။
တစ် ဦး ကစွန့်ပစ် tile ကိုယူနိုင်ပါတယ် ရုံပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းရန်, အရာလည်းကစားသမား၏ကျန်မှတက်မျက်နှာပြရမည်ဖြစ်သည်။
သတိပေးခြင်း! သငျသညျကစားခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိဘဲ, စုဆောင်းရန်ရိုးရှင်းစွာစွန့်ပစ် tile ကိုယူလို့မရပါဘူး။
စွန့်ပစ်သော tile ကိုမည်သူကမှမယူပါကကျန်ဂိမ်းအတွက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ (ဆိုလိုသည်မှာ၊ နောက်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကစွန့်ပစ်ထားသော tile လက်ကိုစိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့မယူနိုင်တော့ပါ) ။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်စွန့်ပစ်ထားသော tile ကို Pung သို့မဟုတ် Kong ကိုပြီးအောင်လုပ်ရန်သို့မဟုတ် Mahjong ကိုလုပ်ရန်လိုသည်။
¡Ojo, စွန့်ပစ် tile ကိုဆွဲသောသူသည်မြို့ရိုးမှ tile ယူလို့မရပါဘူး! (ဟောင်ကောင် မှလွဲ၍)
အကယ်၍ သူသည် Mahjong ကိုပြုလုပ်ပါကသူသည်သူနိုင်သည့်ပေါင်းစပ်မှုအားဖြင့်လဲလျောင်းနေသောလဲနေသောအကွက်ကိုချန်ထားလိမ့်မည်။
စွန့်ပစ်၏ညာဘက်မှကစားသမားသည်တိုကင်ကို Chi တစ်ခုဖြစ်စေလိုသည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကစားသမားသည်အတုံးကွက်ကိုပစ်ချရမည် (သတိရပါ၊ စွန့်ပစ်သောကြွေပြားကိုဆွဲသူသည်နံရံမှယူခြင်းမဟုတ်ပါ၊ က Kong အဖြစ်မှလွဲလျှင်) ။
စွန့်ပစ်လိုက်သော tile ကိုကျန်ဂိမ်းများအတွက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
တစ် ဦး စွန့်ပစ် tile ကိုများအတွက်တိုက်ပွဲ
တစ် ဦး ထက်ပိုသောကစားသမားသည်တူညီသောတိုကင်ကိုတောင်းဆိုပါက၊ တိုကင်ကိုယူရန် ဦး စားပေးအစီအစဉ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
တိုကင်လုပ်ချင်တဲ့ကစားသမား Mahjong (o Hu).
တစ် ဦး များအတွက်လက္ခဏာသက်သေလိုအပ်သူကစားသမားသည် ဖုန် သို့မဟုတ် ဟောင်ကောင်.
မှတ်စု: အကယ်၍ ကစားသမားနှစ် ဦး (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုသောတူညီသောအတုံးကို Mahjong ကိုလုပ်ချင်သည်ဆိုလျှင်ပထမဆုံးအလှည့်ဖြစ်သောကစားသမားသည်သာမန်အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ကစားသည်။ ကစားသမားတစ် ဦး တည်းသာအနိုင်ရနိုင်သည်။
တစ် ဦး စွန့်ပစ် tile ၏ခိုးမှု
ကစားသမားတစ် ဦး သည်အခြားတစ်ခုမှဖယ်ထုတ်လိုက်သောအပိုင်းအစတစ်ခုကိုဆွဲယူသောအခါသူသည်ခိုးယူထားသောအပိုင်းအစကိုထိုသူအားမည်သူပေးအပ်သည်ကိုညွှန်ပြရန်နေရာချကာခေါက်ရမည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကစားသမားတစ် ဦး သည်၎င်းမှဖယ်ထုတ်ထားသောတိုကင်ကိုဆွဲလျှင် မိမိလက်ဝဲဘက်ကစားသမား (Bamboo3သို့မဟုတ်9of Discs) သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအမှတ်အသားကိုဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် ထား၍ ထိုပေါင်းစပ်မှုအားသင်ထားခဲ့ရမည်။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်၎င်းမှဖယ်ရှားသောလက္ခဏာသက်သေဆွဲပါက ရှေ့မှောက်၌ကစားသမား ခိုးယူထားသောကြွေပြားကိုလှည့်ပြီးအလယ်တွင်ထားပါ။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်၎င်းမှဖယ်ရှားသောလက္ခဏာသက်သေဆွဲပါက ညာဘက်ကစားသမား (9 of Discs) သင်ခိုးယူထားသောကြွေပြားကိုလှည့်ပြီးညာဘက်သို့ချထားပါ။
အခြားကစားသမားတစ် ဦး မှထုတ်ပယ်သောတိုကင်နှင့်ရေးဆွဲထားသည့်ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ထိုဂိမ်းသည်ကျန်ဂိမ်း၏ကျန်ဂိမ်းများကိုပြသရန်လိုအပ်သည်။ ညာဘက်အပိုင်း ကဖွဲ့စည်းခဲ့သူကစားသမား၏။
ဆိုလိုသည်မှာပန်း၊ ဘူတာများနှင့်ဟောင်ကောင်သာမကစွန့်ပစ်ထားသောကြွေပြားများပေါင်းစပ်မှုအားကစားသမားတစ် ဦး စီ၏ညာဘက်တွင်ထားရှိသည်။
နံရံပေါ်ရှိအုပ်ကြွပ်များကုန်သွားပြီးဘယ်သူမှမအောင်နိုင်လျှင်၊ ဒီဂိမ်းအမျိုးအစားများကိုခေါ်ကြသည် null လက်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ အကယ်၍ ကစားသမားတစ် ဦး သည် Mahjong ကိုလုပ်လျှင်သူသည်အမှတ်အားလုံးကို (ပန်းပွင့်အတွက်အချက်များ) လုံးလုံးလျားလျားရေတွက်ရမည်။ အမှတ်ပေါင်းစပ်မှု (သို့) အမှတ် (၁၀) တိုင်းအတွက်အမှတ် (၁၀) ခုအတွက်ရမှတ်တစ်ခုစီအတွက်ဖယ်ထုတ်လိုက်ရမည်။ မျက်နှာချပစ်) ။
ပထမအချက်အနေဖြင့်အနည်းဆုံး ၈ မှတ်ရရှိသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်ကစားနည်းတစ်ခုစီကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့နောက်ပန်းပွင့်များအတွက်အမှတ်ထည့်သွင်းထားသည်။
ဥပမာအားဖြင့်ကစားသမားတစ် ဦး သည် (ပန်းပွိုင့်များကိုရေတွက်ခြင်းဖြင့် ၁၂ မှတ်) ရခဲ့လျှင်သူသည်သူ၏စွန့်ပစ်ချက်မှတိုကင် ၁၂ ခုကိုယူသင့်သည်။
သူသည် (၃ မျက်နှာတစ်ခုစီ = ၁၀ မှတ်၊ ၂ မျက်နှာအထိ = ၁ မှတ်စီ) ၃ အုပ်တို့ကိုလည်းယူနိုင်သည်။
မှတ်စု: ကစားသမားတစ် ဦး က Mahjong အားပြောသည်နှင့်တပြိုင်နက်အခြားကစားသမားများကအမှတ်အားလုံးကိုရေတွက်ပြီးသည်အထိချန်ထားသည့်အုပ်ကြွပ်များကိုမပြသင့်ပါ။
ဂိမ်းတစ်ခုစီပြီးသည်နှင့် (တစ်စုံတစ် ဦး ကအနိုင်ရရှိသည်ဖြစ်စေ၊ လက်မရှိခြင်းရှိမရှိ) ကစားသမားတစ် ဦး စီနှင့်သက်ဆိုင်သောလေများကို (လှည့်ပတ်သွားသည် မှလွဲ၍ ကစားသမားမဟုတ်ဘဲလေများမဟုတ်ပါ) လှည့်သည်။
အရှေ့ကစားသမားသည်မြောက်အမေရိက၊ တောင်ကိုရီးယားသည်အရှေ့၊ အနောက်ကိုတောင်နှင့်မြောက်သို့အနောက်သို့ပြောင်းသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုလှည့်လည်၏အဆုံးမှာလေတိုက်လှည့်အပြင်, ကစားသမားများ၏ရာထူးအတွက်လဲလှယ်လည်းမရှိ။ ဤထိုင်ခုံအပြောင်းအလဲနှင့်အတူရည်ရွယ်ချက်မှာကစားသမားတစ် ဦး စီသည်ကစားပွဲတစ်လျှောက်ရှိအခြားကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီအားထားဝယ်ထားရန်ဖြစ်သည်။
အရှေ့လေ၏ပတ်ပတ်လည်ရဲ့အဆုံးမှာနှင့် တောင်လေတိုက်၏လည်ပတ်စတင်မီ, သူတို့ထိုင်ခုံယခုအရှေ့နောက်တဖန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကစားသမားနှင့်တောင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအကြားလဲလှယ်နေကြသည်။ အနောက်နှင့်မြောက်ကစားသမားများသည်လည်းသူတို့၏နေရာများကိုလဲလှယ်ကြသည်။
တောင်လေနှင့်ပတ်ပတ်လည်၏အဆုံးမှာနှင့် အနောက်လေတိုက်၏အလှည့်လည်မတိုင်မီ, ယခုအရှေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကစားသမားအနောက်ကစားသမားရဲ့ထိုင်ခုံ, တောင်ဘက်မြောက်ဘက်ကစားသမား, အနောက်ဘက်မှတောင်ဘက်မှမြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်သို့သွားလိမ့်မယ်။
အနောက်လေရဲ့အဆုံးမှာနှင့် မြောက်လေတိုက်၏လှည့်လည်မစတင်မီယခုအရှေ့နှင့်အနာဂတ်ဖြစ်မည့်ကစားသမားကိုလဲလှယ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်အနောက်နှင့်မြောက်ကစားသမားများသည်လည်းသူတို့၏နေရာများကိုလဲလှယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အတော်လေးရှုပ်ထွေးနေပုံရသည် (သို့ဖြစ်ပေသည်)၊ သို့သော်ဤနည်းဖြင့်ကစားသမားအားလုံးကသူတို့၏ပြိုင်ဘက်များကိုဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်မှပြောင်းလဲကာဂိမ်းအစတွင်လေပြင်းမုန်တိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများအားလုံးတစ်ခုလုံးအတွက်အမှတ်အသားပြုခြင်းကိုတားဆီးပေးသည်။
မှတ်စု: ထိုင်ခုံအပြောင်းအလဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပြုလုပ်ပြီးပြီလားဆိုတာသိရန်နည်းတစ်နည်းမှာတောင်ကိုလှည့်ထွက်သောအခါလေတိုက်သည့်အခါကစားသမားသည်တောင်ပတ်ပတ်လည်အစတွင်အရှေ့ကစားသမားဖြစ်သင့်သည်။ အနောက်ကိုအရောက်သွားသူဟာအရှေ့ကိုလှည့်ပတ်တဲ့အခါအရှေ့ဖြစ်သင့်တယ်။
ကန ဦး ပန်းများကိုပြပါ
ကစားသမားတစ် ဦး စီအနေဖြင့်သူ၌ပန်းများရှိမရှိ ("ပန်းပွင့်" သို့မဟုတ် "ပန်းပွင့်" ဟုခေါ်ဆိုခြင်း) သို့မဟုတ်ပန်းများမရှိသလား ("ငါမရှိဘူး"၊ "ငါမရှိဘူး" သို့မဟုတ် "ပန်းမရှိဘူး") ကိုပြသရမည်။ နံရံ၏အဆုံးတွင်ပန်းပွင့်တိုကင်များကိုယူပြီးနောက်ကစားသမားတစ် ဦး စီတွင်သူတို့၌ပန်းများမရှိတော့ကြောင်း ("ပန်းပွင့်မရှိတော့" သို့မဟုတ် "ပန်းများမရှိတော့") ကိုခေါ်ရမည်။
ကစားသမား Este သူ့မှာ Flowers and Seasons Token ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သူကညာဘက်ကိုစွန့်ပြီးနံရံရဲ့အဆုံးကနေအခြားအမှတ်အသားတစ်ခုကိုယူပြီးပြသလိမ့်မယ် (သူသည် Disc5ကိုရရှိသည်) ။ သူကထပ်တိုးအမှတ်အသားကိုယူပြီးသည်နှင့်အရှေ့ကစားသမားတွင်သူ၌ပန်းမရှိတော့ကြောင်းကျယ်လောင်စွာပြောသင့်သည်။
ကကစားသမားရဲ့အလှည့်အခါ အပေါ် ပန်းပွင့်မရှိဘူးလို့ပြောသင့်တယ်
အရှေ့၌ရှိသကဲ့သို့, ကစားသမား အနောက်၎င်းတွင်ပန်းနှင့်ရာသီတိုကင်များရှိသည် (၎င်းတွင်ပန်းပွင့်တိုကင် ၂ ခုရှိသည်)၊ နံရံမှအပိုကြွပ်များကိုယူသောအခါအက္ခရာ ၂ လုံး၏တူညီသောအုပ်ကြွပ်နှစ်ခုထွက်လာလိမ့်မည်။ အစားထိုးအုပ်ကြွပ်များကိုဆွဲပြီးနောက်အနောက်သည်၎င်းတွင်ပန်းများမရှိတော့ဟုပြောလိမ့်မည်။
ထိုအခါကကစားသမားရဲ့အလှည့်ပါလိမ့်မယ် မွောကျ။ သူ့မှာပန်းတွေလည်းမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ပန်းမရှိဘူးလို့ကျယ်လောင်စွာပြောလိမ့်မယ်။
အရှေ့ကစားသမားသည် tile ကိုပထမဆုံးစွန့်ပစ်သည်။ အရှေ့ကစားသမားကဝါးတိုကင်နံပါတ် ၃ ကိုလှိမ့်လိုက်ပြီးသူ့ရှေ့မှာရှေ့မှာထားလိုက်သည်။
၀ ါးတိုကင်သုံးခုကိုတောင်ကစားသမားမှလိုချင်သည်။ မည်သူမျှမတောင်းသောကြောင့်၎င်းသည်ယူ (Chi) (၀ ါး၏ ၂-၃ မှ ၄-၄) ဖြစ်ကာ၎င်းကိုသူ၏ညာဘက်မျက်လုံး၌ ထား၍ ၀ ါး ၃ လုံးကိုလှည့ ်၍ ထွက်ခွာသည်။ ဘယ်ဘက်ရှိအမှတ်အသားသည်၎င်းကိုမိမိ၏ဘယ်ဘက်တွင်အရှေ့ဘက်မှပစ်ချသူဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြသည်။
တောင်ပိုင်းသည်စွန့်ပစ်ခံထားရသောကြောင့်နံရံမှမခိုးနိုင်ပါ။ ယခုသူသည်တိုကင်ကိုစွန့်ပစ်ပြီး ၉ ခုစက်ဝိုင်းများကိုလှိမ့်ပစ်ရမည်။
သို့သော်9of Circles လက္ခဏာသက်သေသည်မြောက်ကိုးရီးယားကစားသမားအား Kong တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ ထို့ကြောင့်အနောက်ကစားသမားအလှည့်ကျသွားလိမ့်မည်၊ မြောက်ကစားသမားသည်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပြသလိမ့်မည် (သူသည်လျှို့ဝှက်ထားခြင်းမရှိသောဟောင်ကောင်ကိုပြရမည်)၊ ဝါး ၉ ၏တစ်ပင်ကိုပေါင်းစပ်၏အလယ်ဗဟိုတွင်လှည့်သည်။ ကစားသမားသည်တောင်ဘက်သို့သူ့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသည်။ သူသည်နံရံ၏အဆုံးမှအပိုအမှတ်အသားတစ်ခုယူလိမ့်မည် (Kong Kong ကိုဖွဲ့စည်းပြီးနောက်နံရံ၏အဆုံးမှအပိုအမှတ်အသားကိုရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သောကြောင့်) ။ သူကဇာတ်ကောင် ၇ ယောက်ရတယ်။
ယခုသူသည်တိုကင်ကိုပစ်ရန်မြောက်ကိုရီးယားကစားသမားဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသူသည်လျှို့ဝှက်ဟောင်ကောင်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည် (ထို့ကြောင့်သူသည်တိုကင် ၄ လုံးကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်လိုက်သည်) နှင့်နောက်ထပ်အပိုအမှတ်အသားတစ်ခုယူလိမ့်မည်။
မိမိအမှတ်အသားကိုနံရံမှယူပြီး (သူသည်စက်ဝိုင်း ၁ ရရှိသည်) ပြီးနောက်မြောက်ကစားသမားသည်အမှတ်အသားကိုပယ်ဖျက်ရမည်။ ထို့နောက်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှစိတ်မ ၀ င်စားလျှင်အရှေ့ကစားသမားသည်ကစားသူမည်သူဖြစ်သည်၊ သူသည်နံရံမှအမှတ်အသားကိုယူလိမ့်မည်။ ကစားသမားတစ် ဦး သည် Mahjong ပြုလုပ်သည့်အခါ (သို့) အားလုံးသောအုပ်ကြွပ်များအသုံးမပြုသည့်အချိန်တွင်ဤဂိမ်းသည်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။
RCM တွင် ၁ မှတ်မှ ၈၈ မှတ်အထိ ၈၁ ပြဇာတ်ရှိသည်။ သူတို့လိုအပ်တယ် 8 အချက်များ Mahjong လုပ်နိုင်ဖို့
အကယ်၍ ကစားသမားတစ် ဦး သည်အခြားတစ် ဦး မှထုတ်ပစ်လိုက်သောချစ်ပ်ဖြင့်ပိတ်လိုက်လျှင်သူသည်ထိုကစားသမားထံမှသူ၏ရမှတ်ကိုရရှိသည်။ ကစားသမားအားလုံးမှ (အပိုမှတ် ၈ ခုကို (ပိတ်ရန်ခွင့်ပြုသောချစ်ပ်ကိုပစ်ချသူအပါအ ၀ င်) ရရှိသည်။
အကယ်၍ သူသည်နံရံမှဆွဲလိုက်သည့်အကွက်တစ်ခုနှင့်အတူပိတ်လျှင်သူသည်အမှတ် (၈) မှတ်ထပ်တိုးပြီးပြိုင်ဘက် (၃) ယောက်စီထံမှရရှိသောပမာဏကိုရရှိသည်။
ဖယ် Winner Points + 8 -
အနားယူပါ 8 -
အားလုံး - Winner Points + 8
အကယ်၍ ရွေ့လျားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ပေါင်းစပ်မှုနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကိုအသုံးပြုပါကဤပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုမှအများဆုံးတစ်ခုကိုအခြားပေါင်းစပ်မှုများနှင့် အသုံးပြု၍ အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည် - သန့်ရှင်းသော ၀ ါးဘား Terminal နှစ်ခုအတွက် ၁ မှတ်၊ စင်ကြယ်သောအက္ခရာနှစ်လုံးအတွက် ၁ မှတ်နှင့်နှစ်ဆရောနှောထားသော Chow ၁ မှတ် (၀ ါး ၁-၂ မှ ၃-၃ နှင့်စာလုံး ၁-၂-၃) ။ Mixed Double Chow မှ ၀ ါး ၇-၈-၉ နှင့်ဇာတ်ကောင် ၇-၈ မှ ၉ တို့ကို ထပ်မံ၍ အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်စင်ကြယ်သောပြဇာတ်နှစ်မျိုး (၁-၂ ကို ၁-၂) သုံးပြီးဖြစ်သောကြောင့် -1, ဝါးနှင့်ဇာတ်ကောင်များအတွက်နှစ် ဦး စလုံး) ။
သဘာဝအားဖြင့်ဝှက်ထားသောပြဇာတ်များတွင်အချက်များကိုလျှို့ဝှက်လက်ဖြင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သော်လည်း Hidden Hand အတွက်အချက်များကိုထည့်သွင်းမထားပါ။
ဤပြဇာတ်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - အနိမ့်ဂုဏ်ထူးများဖြင့်ချုပ်ထားသောကြွေပြားများ၊ ကြီးကျယ်သောဂုဏ်ထူးဖြင့်ချုပ်ထားသောအုတ်ကြွပ်များ၊ ၇ ခု၊ ​​ရေကန်လေးခု၊ လျှို့ဝှက် Pung ၄ ခု၊ ဂိတ်တံခါးကိုးကောင်၊
Exposed Kong နှစ်ခုသည်တန်ဖိုး ၄ မှတ်ဖြစ်သည်။
Exposed Kong သည် Hidden Kong နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး ၆ မှတ်ဖြစ်သည်။
Hidden Kong နှစ်ခုသည်တန်ဖိုး ၈ မှတ်ဖြစ်သည်။
1. တူညီနှစ်ချက် Chi
တူညီသောဝတ်စုံနှင့်အတူတူပင်အရေအတွက်ကို sequence ကိုနှစ်ခုလှေကား။
နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောဝတ်စုံနှစ်ခုလှေကား, ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့အရေအတွက်က sequence ကို။
တူညီတဲ့ဝတ်စုံနှစ်ခု Chis, တစ်ဆက်တိုက်အရေအတွက်ကို sequence ကိုအတူ။
တူညီသောဝတ်စုံ၏ 1-2-3 နှင့် 7-8-9 လှေကားများ။
ကိုယ်ပိုင်လေသို့မဟုတ်လွှမ်းမိုးထားသည့်လေ (အလှည့်အပြောင်း၏လေ) မှလွဲ၍ အခြားအသုံးအနှုန်းများ (ကောင်တာ ၁ နှင့် ၉) သို့မဟုတ်လေများပါ ၀ င်သည်။
Kong သည်စွန့်ပစ်ထားသောအမှတ်အသားမှသို့မဟုတ်ပြထားသော Pung သို့အမှတ်အသားတစ်ခုထည့်သွင်းခြင်းမှရရှိသည်။ မှတ်ချက် - ထိတွေ့ထားသော Pung ကိုချဲ့ထွင်ရန်ဖယ်ထုတ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
ဝတ်စုံ ၃ မျိုးအနက် ၁ ခုအတွက်မပါရှိသည့်လက်တစ်ချောင်း။ ဆိုလိုသည်မှာဝတ်စုံ ၂ ခုသာရှိသည်။ ဒါဟာဂုဏ်ထူးသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမ Honors တိုကင်နှင့်အတူသာဝတ်စုံကိုတိုကင်၏ဖွင့်ထားတစ် ဦး ကလက်။ ဆိုလိုသည်မှာလေ၊ နဂါးများမရှိ။
၉ ။ Edge ကိုစောင့်ပါ
3-7 သို့မဟုတ် 1-2 ပါသော Chi တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရန် 8 သို့မဟုတ်9ကိုစောင့်နေသည်။ အခြားမည်သည့်ဝိဇ္ဖာအမျိုးအစားနှင့်မဆိုပေါင်းစပ်သောအခါ (ဥပမာအားဖြင့် 7-7-8-9 ချစ်ပ်များနှင့်ပိတ်ရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းကို Edge Wait နှင့် Simple Wait ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်သည်။ ၇ ကို ၇-၈-၉ ဒါမှမဟုတ် ၇-၇ ကိုပုံဖော်သည်။
မွတ္စု: တိုကင်တစ်ခုတည်းလိုအပ်သည့်အခါ Hold Point များသာပေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့် - ၀ ါး ၇ နှင့်သာပိတ်ရန်စောင့်နေသည် -
အပိတ်ခုံစောင့်ခုံဖြင့်ပိတ်ပါ (ဥပမာ - ၂-၄ ရှိ၍ ၃ ကိုစောင့်သည်) ။ အခြားမည်သည့်ဝိဇ္ဇာအမျိုးအစားနှင့်မဆိုပေါင်းစပ်သောအခါဤလက်သည်မမှန်ကန်ပါ (ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂-၂-၂-၄ ချစ်ပ်များနှင့်ပိတ်ရန်စောင့်ဆိုင်းရခြင်းသည် Closed Wait နှင့် Simple Wait ၏ပေါင်းစပ်မှုဟုယူမှတ်သည်၊ (၄) ။ သို့သော် Waits ကိုပေါင်းစပ်ခြင်း (ဥပမာ - 2-4-3-2-2 နှင့်2ကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းသည် Edge Wait နှင့် Closed Wait ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အမှတ်အသား ၈ ခုသာပိတ်ပစ်နိုင်သည်။ )
ဥပမာအားဖြင့် အကယ်၍ ၎င်းကိုစက်ဝိုင်း ၅ လုံးဖြင့်သာပိတ်နိုင်သည်ဆိုလျှင် -
pair တစုံကိုဖွဲ့စည်းသောကဒ်နှင့်အတူပိတ်ပါ။ အခြားမည်သည့်ဝိဇ္ဇာအမျိုးအစားနှင့်မဆိုပေါင်းစပ်သောအခါဤရွေ့လျားမှုသည်မမှန်ကန်ပါ။ (ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂-၂-၂-၄ ချစ်ပ်များနှင့်ပိတ်ရန်စောင့်ဆိုင်းရခြင်းသည် Closed Wait နှင့် Simple Wait ၏ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆသည်၊ (၄) ။ ထိုစုံတွဲနှင့်တွဲဖက်ရန်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခု (ဥပမာ 2-2-2-4 နှင့်3သို့မဟုတ်4ကိုမျှော်လင့်ထားပါက) လက်ခံနိုင်ဖွယ်လည်းမရှိပါ။
ပန်းတစ်ပွင့်စီသည် ၁ မှတ်ထိုက်သည်။ သူတို့ကရမှတ်အားလုံး၏ပေါင်းလဒ်ရဲ့အဆုံးမှာရေတွက်နေကြသည်။ သူတို့ကအနည်းဆုံး 1 မှတ်ရမှတ်အစေခံပါဘူး။ သင်လိုချင်သည့်အခါတိုင်းသူတို့ပြသနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို (ကျန်သည့်ရွေ့လျားမှုနှင့်ထိတွေ့နေသောကြွေပြားများကဲ့သို့) လက်ျာဘက်၌ကျန်ကြွင်းနေပြီးနံရံအဆုံးမှအုတ်ခဲအသစ်တစ်လုံးကိုယူသည်။ အကယ်၍ ကစားသမားသည်တိုကင်အသစ်ကိုပိတ်လိုက်ပါကနံရံပိတ်ခြင်းအတွက်အမှတ်တစ်ခုထပ်ပေါင်းထည့်မည်။
နဂါး၏ Pung ၁၄
နဂါး၏ Pung (သို့မဟုတ် Kong) ။ အဲဒါကိုဝှက်ထားနိုင်တယ်။
ပတ် ၀ န်းကျင်၏လေနှင့်ကိုက်ညီသောကြီးသောလေ၏ Pung (သို့မဟုတ် Kong) ။ ၎င်းကိုဝှက်ထားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြနိုင်သည်
ကိုယ်ပိုင်လေ၏ Pung (သို့မဟုတ် Kong) သည်ဝှက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြနိုင်သည်။
သာ Chis ပါဝင်သည်နှင့်အဘယ်သူမျှမဂုဏ်ထူးရှိပါတယ်သောလက်။
ပေးထားသောအတုံးကွက်၏ (၄) ကွက်ကို Kong ကကြေငြာခြင်းမပြုဘဲအသုံးပြုပါ။ လျှို့ဝှက်သိုလှောင်ထားသောဟောင်ကောင်သည် Hoard Token ဟုမသတ်မှတ်ပါ။
20. ရောနှောနှစ်ချက် Pung
အဆိုပါလက်၌တူညီသောနံပါတ်တူ Pung သို့မဟုတ် Kong နှစ်ခု (သို့သော်သိသာကွဲပြားခြားနားသောဝတ်စုံ) ပါရှိသည်။
လက်၌ထိတွေ့မှုမရှိသော Pungs နှစ်ခုပါရှိသည် (ဆိုလိုသည်မှာစွန့်ပစ်ထားသည့်ကြွေပြားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ) ။ လျှို့ဝှက်ဟောင်ကောင်သည်လျှို့ဝှက်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်မထိုက်တန်ပါ။
၂၂ ။ Hidden Kong
ဟောင်ကောင်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်သောကိုက်ညီသောအုတ်ကြွပ် (၄) ခုပါဝင်သည်။ အားလုံးအုပ်ကြွပ်မျက်နှာကိုလှည့်နေကြသည်။
Terminal တိုကင်သို့မဟုတ် Honor တိုကင်မပါဘဲလက်။ လက်ထဲရှိချစ်ပ်အားလုံးသည်ရိုးရှင်းပါသည် (ချစ်ပ်များ ၂-၈) ။
၂၄။ Terminals နှင့် Honours တို့၏ပြန်လည်အပ်နှံထားသည့်အရာ (အားလုံးဂုဏ်ထူးနှင့် Terminal များနှင့်အတူ)
အတွဲနှစ်ခုအပါအ ၀ င်အနည်းဆုံး Terminal tile တစ်ခုသို့မဟုတ် Honor တစ်ခုပါ ၀ င်သောလက်။
သူတို့နှစ်ယောက်အပါအ ၀ င် Wall မှဆွဲထုတ်ထားသောကြွေပြားအားလုံးနှင့်အတူပြီးစီးခဲ့သည်။
၂၇ ။ နောက်ဆုံး Tab
ကျန်ရှိနေသေးသောထိုအမျိုးအစား၏နောက်ဆုံးဖြစ်သောစွန့်ပစ်ထားသော tile ဖြင့်ပိတ်ပါ
အခြားကစားသမားများကထိတွေ့ပေါင်းစပ်မှုများတွင် ၀ ါး ၄ ၏သုံးပိုင်းကိုဖယ်ထုတ်သည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသည် (နောက်ဆုံး ၀ ါး ၄ ၏အပိုင်းအစ) ။ Kong Robo နှင့်ပေါင်း။ မရပါ။
4 Pung (သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်) နှင့် pair တစုံကဖွဲ့စည်းလက်။
၂၉ ။ Semipura လက် (ဂုဏ်ထူးနှင့်သန့်ရှင်းသောလက်)
Honors ချစ်ပ်များနှင့် တွဲဖက်၍ ဝတ်စုံသုံးမျိုးအနက်မှတစ်ခုတည်းမှချစ်ပ်များပါ ၀ င်သည်။
30. သုံး Staggered ရောနှောပြက်လုံး
အဆိုပါဝတ်စုံသုံးခု၏ Chis သုံးခုပါ ၀ င်သောသူ၏စတင်ချစ်ပ်များသည်အဆင့်တစ်ဆင့်၏တက်နေသောကြားကာလတွင်ရှိသည်။
ဂိမ်းထဲမှာ5အမျိုးအစားတိုကင်ပေါ်လာသည့်အတွက်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းလက်။ ဝတ်စုံသုံးမျိုးမှာဇာတ်ကောင်များ၊ ဒစ်များ၊ ၀ ါးများနှင့်လေနှင့်နဂါးများဖြစ်သည်။
လက်၌နဂါးနှစ်ပုန် (သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်) ရှိသည်။
34. Hidden Kong ၂ ခု
ထိတွေ့ခြင်းမရှိသေးသောနှစ်ခု Kong ကပါဝင်သည်တစ် ဦး လက်။
ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် (၁ မှ ၉ အထိအုပ်ကြွပ်များ) Chis သုံးခု၏ဖွဲ့စည်းသည်။ Todo Chi နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
ဒေါင်လိုက်အချိုးကျသောအုတ်ကြွပ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ပေါင်းစပ်မှုများ (ဆိုလိုသည်မှာတူညီသောမျက်နှာနှင့်အပေါ်ဖက်ကိုကြည့်ရှုသည့်အပြားများဖြင့် - ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၈၊ ၉ အရိတ်များ၊ ၂၊ ၄၊ ၅၊ ၆) , 1, Bambúesနှင့်အဖြူရောင်နဂါး၏) ။ ပျက်ကွက်မိသားစုများအတွက်အချက်ပါဝင်သည်။
37 Triple Chi ရောနှောခဲ့သည်
သုံးတန်းတူ Chis, ဒါပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောဝတ်စုံနှင့်အတူတစ် ဦး လက်။
လက်၌ Pung (သို့) Kong သုံးခုစီရှိပြီးမတူညီသောဝတ်စုံတစ်ခုစီနှင့်ယခင် Pung ထက်သာလွန်သောအရေအတွက်ရှိသည်။
အဘယ်သူမျှမအချက်များရှိပါတယ်တဲ့လက်။ ပန်းပွင့်များအတွက်အမှတ်သည်ဤရမှတ်သို့မရေတွက်ပါ။ အနိုင်ရ 8 မှတ်ပြီးနောက်ပန်းပွင့်ထည့်သွင်းထားသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ၀ ါး (၃) ၏နောက်ဆုံးအပိုင်းမဟုတ်သည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်အတူပိတ်ခြင်း၊ လျှို့ဝှက်လက်မဟုတ်သလိုထိတွေ့နေသောလက်လည်းမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် All Chi၊ All Pung အားလုံးမဟုတ်သကဲ့သို့ Wait အတွက်လည်းမရှိ၊ Pung of Terminals သို့မဟုတ် Honors နှင့် Last Token စသည်ဖြင့်အချက်များမရှိပါ။
40. နံရံ၏နောက်ဆုံး Tab
နံရံပေါ်ရှိနောက်ဆုံး tile နှင့်ပိတ်ပါ။ Close the Wall နှင့်ပေါင်းစပ်။ မရပါ။
နံရံ၏နောက်ဆုံး tile ကိုလွှင့်ပစ်ပါ။
Extra Kong တိုကင်ဖြင့်ပိတ်ပါ
43. Kong Kong လုယက်မှု
သူသည် Pung မှ Kong မှကစားသမားတစ် ဦး အားခိုးယူသည့်အမှတ်အသားနှင့်အနီးကပ်ထားပါ။ လုံးဝဖုံးကွယ်ထားသောလက်နှင့်မပေါင်းနိုင်ပါ။
အနည်းငယ်ဂုဏ်ထူးနှင့်အတူချုပ် 44 တိုကင်
အောက်ပါအုပ်ကြွပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်လက် (၅) ခုမှ (၆) ခု (တွဲမထားပါ) ၈ နှင့် ၉ တွဲချုပ်ထားသည်။5Honors တိုကင်ဖြင့်ပြဇာတ်ကို Sewn Tokens ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်လုံးဝဖုံးကွယ်ရန်မလိုအပ်သော်လည်းလက်ကိုဝှက်ထားရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာစွန့်ပစ်ထားသော tile ကိုပိတ်ရန်ဆွဲနိုင်သည်။ အားလုံးမိသားစုများသို့မဟုတ်ဝှက်ထားသောလက်နှင့်မပေါင်းနိုင်ပါ။
အထူးဝတ်စုံတစ်ခု၏ချစ်ပ်များ ၁-၄-၇၊ အခြားဝတ်စုံ ၂-၅-၈ နှင့်တတိယဝတ်စုံ၏ ၃-၆-၉ တို့ပါဝင်သည်။ လက်ကိုဖုံးကွယ်စရာမလိုပါ (ချုပ်ရိုးချုပ်အတွက်မဟုတ်ဘဲစတုတ္ထပေါင်းစပ်မှုအတွက်ပိတ်စရာမလိုဘဲစွန့်ပစ်ခြင်းကိုဆွဲနိုင်သည်) ။ Todo Chi နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
ချစ်ပ်များမှ ၆ မှ ၉ အထိသာပါသောလက်။ No Honors Hand point ပါ ၀ င်သည်။
လက်တွင်3Wind Pung သို့မဟုတ် Kong တို့ပါဝင်သည်။
50 မိသားစုများ 3. အစွန်းရောက် Chis
ဝတ်စုံတစ်ခု၏ Chows 1-2-3 နှင့် 7-8-9၊ အခြားဝတ်စုံတစ်ခုမှ 1-2-3 နှင့် 7-8-9 နှင့်ကျန်ရှိသောတတိယဝတ်စုံ ၅ ခုတွဲပါဝင်သည်။ Mixed Double Chi၊ Terminal နှစ်ခု၊ No Honour နှင့် Chi အားလုံးအတွက်အချက်များပါဝင်သည်။
51. သုံးသန့်စင်သော Chis အရှိန်မြှ
လက်တစ်ချောင်းတည်းသောဝတ်စုံတစ်မျိုးစီ၏သုံးခွက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ တစ်ခုချင်းစီသည်ယခင်ချင်း၏အစပိုင်းတွင်ထက်များစွာသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုကြီးသောအစပြုသည့်အပိုင်းအစတစ်ခုစီရှိသည်။ တစ်ခု (သို့) သုံးလုံး၏တစ်ခုကြားကာလသည်နှစ်ခုကြားကာလဖြစ်သည်။
52 နှင့်အတူ 5. အားလုံး
ပေါင်းစပ်မှုတိုင်းတွင် (အတွဲတစ်ခုအပါအ ၀ င်) ၅ ခုပါ ၀ င်သောလက်။
53. ရောနှော Triple Pung
တူညီသော Pung (သို့မဟုတ် Kong) သုံးခုရှိသော်လည်းလက်တစ်ဖက်စီမှာကွဲပြားခြားနားသောဝတ်စုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
Hidden Pung သုံးခု
ကြေငြာမထားသည့် Pungs သုံးခု (လျှို့ဝှက်ဟောင်ကောင်ရေတွက်။ မရ) ပါဝင်သည်။
ချစ်ပ်ခုနစ်ချောင်းပါသောလက်။ ၎င်းသည် Simple Wait ဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ ပြဇာတ်ကိုအဆုံးသတ်ရန်ဖယ်ထုတ်လိုက်သောကြွေပြားကိုဆွဲနိုင်သည်။ အားလုံး (Pung of Pairs)၊ Hidden Hand (သို့) ရိုးရှင်းသောလက်များနှင့်မပေါင်းနိုင်ပါ။ အားလုံးမိသားစုများ၊ လုံးဝဖုံးကွယ်ထားသောလက်၊ သိုလှောင်ထားသောတိုကင်၊ ဂုဏ်ထူးမရှိ၊ ရိုးရှင်းသော၊ မိသားစုတစ်စုပျောက်ဆုံးနေခြင်း၊
Great Honors နှင့်အတူချုပ် 56 တိုကင်
ဂုဏ်ပြုခုနစ်ခု (ထပ်ခါတလဲလဲမရှိပဲ) တစ်ခုစီမှပြုလုပ်သောလက်နှင့်ချုပ်ထားသောကြွေပြားခုနစ်ခု (ဆိုလိုသည်မှာချုပ်ထားသောကြွေပြားများလက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကိုးခု၏အဘယ်အမွှေး ၇ ခုပါရှိသည့်ဝတ်စုံ ၃ ခု) မှကြွေပြားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တ ဦး တည်းဝတ်စုံကို၏ 1-4, အခြားဝတ်စုံကို 7-2-5 နှင့်တတိယဝတ်စုံကို၏ 8-3-6) ။ လက်ကိုဝှက်ထားရမယ်။ လက်များနှင့်ပေါင်းစည်း။ မရပါ။ အားလုံးမိသားစုများ၊ Hidden Hand သို့မဟုတ် Simple Wait ။
57. အားလုံးရွယ်တူချင်းများ (အားလုံး Pung Peers များ)
(ထိုစုံတွဲအပါအဝင်) ပင်ကြွေပြားများ၏ Pung ကဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ Pung All Points၊ ဂုဏ်ထူးမရှိသူနှင့်ရိုးရှင်းသူအားလုံးအတွက်အချက်များပါဝင်သည်။ ၎င်းကို Absent Family သို့မဟုတ် Pure Hand နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
အတူတူဝတ်စုံနှင့်ဂုဏ်ထူးမပါဘဲချစ်ပ်၏လုံးဝပါဝင်သည်ဟုလက်။ No Honors လက်မှအချက်များပါဝင်သည်။
59. တူညီ Triple Chi
သုံးတန်းတူ Chis နှင့်တူညီသောဝတ်စုံကို။ Pure Consecutive Pung လက်ဖြင့်မပေါင်းနိုင်ပါ။
Pung Consecutive Pure (၃) ခု
တူညီသောဝတ်စုံ၏ Pung (သို့မဟုတ် Kong) ၃ ခုနှင့်လက်ချင်း တွဲ၍ တစ်ခုထက်ပိုသောအရေအတွက်ရှိသည်။ Triple Chi Identity နှင့် ပေါင်း၍ မရပါ။
61 ထိပ်တန်း Tabs
tile 7, 8 and9ပေါင်းစပ်ထားသည့်လက် (pair တစုံအပါအ ၀ င်) ။ အဘယ်သူမျှမဂုဏ်ထူးများအတွက်အချက်များပါဝင်သည်။ ၎င်းအား All Pung၊ Absent Family သို့မဟုတ် Pure Hand နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
62 ဗဟို Tabs
tile 4,5and6ပေါင်းစပ်ထားသည့်လက် (pair တစုံအပါအ ၀ င်) ။ အဘယ်သူမျှမဂုဏ်ထူးများအတွက်အချက်များပါဝင်သည်။ ၎င်းအား All Pung၊ Absent Family သို့မဟုတ် Pure Hand နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
63. အောက်ပိုင်း Tabs
tile 1,2and3ပေါင်းစပ်ထားသည့်လက် (pair တစုံအပါအ ၀ င်) ။ အဘယ်သူမျှမဂုဏ်ထူးများအတွက်အချက်များပါဝင်သည်။ ၎င်းအား All Pung၊ Absent Family သို့မဟုတ် Pure Hand နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
64. လေးသန့်စင်သော Chis အရှိန်မြှ
တူညီသောဝတ်စုံ၏ Chis လေးလက်၏လက်၊ ကန ဦး ကြွေပြားများနှင့်အတူချင်းစီသည်ယခင် Chi ၏ကန ဦး tile နှင့် ပတ်သတ်၍ နံပါတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုတဆစ်ချိုးလိုက်သည်။
၆၆ ။ ဂုဏ်ထူးနှင့် Terminal အားလုံး
Terminals (ကောင်တာ ၁ နှင့် ၉) နှင့် Honors (Winds and Dragons) တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်လက်။ Winds နှင့် Terminals များ၏အခြေခံပြဇာတ်များအတွက်နောက်ထပ်အချက်များမရှိပါ။ Pung အားလုံး၊ Terminal Pung နှင့် Honors Pung များအတွက်အချက်များပါဝင်သည်။ နဂါးသုံးခု၊ နဂါးသုံးမျိုး၊ လေပြင်းသုံးခု၊ လေလေးခုလေးခု၊ မဟာလေကြီးလေးခုနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
67. Quadruple Chi အမှတ်တံဆိပ်
တူညီသောဝတ်စုံလေးတန်းတူဖြစ်သော Chis ဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ Pure Staggered Pung၊ Hoard Token နှင့် Pure Double Chi အတွက်အချက်များပါဝင်သည်။
တ ဦး တည်းအားဖြင့်တုန်လှုပ်စေသောတူညီဝတ်စုံကို၏ Pung သို့မဟုတ် Kong လေးခုပါဝင်သည်သောလက်။
လေပန် (Pong သုံးခု) နှင့်ကျန်လေတစ်စင်းပါသောလက်။ ၎င်းကို Dominant Wind နှင့်ကိုယ်ပိုင်လေနှင့်ပေါင်းနိုင်သည်။ သုံးလေတိုက်အချက်များပါဝင်သည်။
နဂါးနှစ်ပုန် (သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်) နှင့်အခြားနဂါးတစ်စုံပါသည့်လက်။ နဂါးတစ် ဦး စီ၏ Pung နှုန်းကိုရေမတွက်ပါ။
လက်လုံးဝဂုဏ်ထူး (လေနှင့် / သို့မဟုတ်နဂါး) ၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ၎င်းကို Pung သို့မဟုတ် Kong တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်၊ ဝှက်ထားနိုင်သည်။ Dragon Pung နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ Todo Pung အချက်များပါဝင်သည်။
၇၃။ ဝှက်ထားသောဖုန်လေး (Hidden Treasure)
မျှော်လင့်မထားသော Pung (သို့မဟုတ် Kong) လေးခုပါ ၀ င်သောလက် အပြည့်အဝဖုံးကွယ်ထားသောလက် (သို့) All Pung နှင့်မပေါင်းနိုင်ပါ။
74 စင်ကြယ်သောအစွန်းရောက် Chis
လက်နှစ်ဖက်ကိုအောက်ပိုင်းခလစ် (၁-၂-၃)၊ အမြင့်ဆုံးခန် (၇-၈-၉) နှင့် ၅ ယောက်စီဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ Pure Hand၊ Pair ခုနစ်လုံး၊ Term Chows နှင့် Pure Double Chow တို့အတွက်အချက်များပါဝင်သည်။
လေလေးခု၏ Pung (သို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်) ကဖွဲ့စည်းလက်။ All Pung (သို့) Domin နှင့် Wind Wind Pung အားလုံးနှင့်မပေါင်းနိုင်ပါ။
နဂါး (၃) ခု၏ Pung (သို့မဟုတ် Kong) မှဖွဲ့စည်းသည်။ Dragon Pung နှင့်မပေါင်းနိုင်ပါ။
လက်ဖြင့် ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၈ ဝါးအုပ်များနှင့်အစိမ်းရောင်နဂါးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းကိုသန့်ရှင်းသောလက်၊ Semi Pure လက် (အစိမ်းရောင်နဂါးများကိုအသုံးပြုပါက)၊ ၇ တွဲ၊ လုံးဝဖုံးကွယ်ထားသောလက်၊ အားလုံးသော Pung (သို့) အားလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
အတူတူဝတ်စုံကို၏ချစ်ပ် 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9 အားဖြင့်ဖွဲ့စည်းလက်, သူတို့မဆိုနှင့်အတူတစ်စုံအောင်။ လက်ကိုဝှက်ထားရမယ်။ Hidden Hand၊ Pure Hand သို့မဟုတ် Terminal များနှင့် Honors Pung တို့နှင့်မပေါင်းနိုင်ပါ။ လုံးဝဝှက်ထားသောလက်နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
79. လေး Kong
4 Kong နှင့်အတူမဆိုလက်။ သူတို့ကိုဝှက်ထားနိုင်တယ်။
အဘယ်သူ၏နံပါတ်တ ဦး တည်းအားဖြင့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားတူညီတဲ့ဝတ်စုံကို၏ချစ်ပ်ခုနစ်စုံကဖွဲ့စည်းလက်။ ၎င်းကိုသန့်ရှင်းသောလက်၊ လုံးဝဖုံးထားသည့်လက်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးစောင့်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်။ မရပါ။
Bambuos ၏နံပါတ် ၁ နှင့် ၉၊ Discs ၁ နှင့် ၉၊ ဇာတ်ကောင် ၁ နှင့် ၉ တို့နှင့် Honors ခုနစျခုစီပါဝငျသညျ။ အဆိုပါစုံတွဲကိုချစ်ပ်မဆိုနှင့်အတူလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဇာတ်ကိုအဆုံးသတ်ရန်ဖယ်ထုတ်လိုက်သောကြွေပြားကိုဆွဲနိုင်သည်။ လုံးဝဖုံးကွယ်ထားသောလက် (သို့) ရိုးရှင်းသော Hold နှင့်မပေါင်းနိုင်ပါ။
Chi, Pung, Kong သို့မဟုတ်အစားထိုးအမှတ်အသားကိုကြေငြာတဲ့အခါကစားသမားတစ် ဦး အမှားလုပ်မိရင်သူကအနိုင်ရပိုင်ခွင့်ရှုံးသည် (သေပြီသငျသညျ, ကစားနိုင်အောင်, စွန့်ပစ်ခိုးယူခြင်း, ဒါပေမယ့်ပေမယ့်)
ကစားသမားများသည်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုတောင်းခံ။ မပြောင်းနိုင်ပါ။ ပထမအကြိမ်သင်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်၊ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည် အပြစ်ပေးသည် နှင့်5အချက်များ (ကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီကိုပေးချေရမည်)၊ တတိယ 10 အချက်များ, စတုတ်ထ 20 အချက်များ, နောက် ... ပြီးတော့။
ယခင်ကစားသမားမစွန့်ခွာခင်နံရံကိုအတုံးကွက်ကိုထိလိုက်ခြင်းသည်ပုပ်နေသောအရာဖြစ်သည်။ ပထမအကြိမ်သင်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်၊ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည် အပြစ်ပေးသည် နှင့်5အချက်များ (ကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီကိုပေးချေရမည်)၊ တတိယ 10 အချက်များ, စတုတ်ထ 20 အချက်များ, နောက် ... ပြီးတော့။
အကယ်၍ တိုကင်ကိုမတွေ့ရပါက၎င်းကို၎င်းရှိရာနေရာတွင်ထားလိမ့်မည်။ တိုကင်ကိုတွေ့ခဲ့ရလျှင်ကစားသမားသည်ထိုဂိမ်းကိုနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ (သေပြီသငျသညျ, ကစားနိုင်အောင်, စွန့်ပစ်ခိုးယူခြင်း, ဒါပေမယ့်ပေမယ့်)
နှောင့်နှေးမှုနှင့်အတူ Pung တောင်းပါ
ထက်ပိုနှင့်အတူ Pung တစ်ခုလက္ခဏာသက်သေတောင်းဆိုပါ3စက္ကန့် နောက်ကျတဲ့အမှားစဉ်းစားသည်။ ပထမအကြိမ်သင်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်၊ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည် အပြစ်ပေးသည် နှင့်5အချက်များ (ကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီကိုပေးချေရမည်)၊ တတိယ 10 အချက်များ, စတုတ်ထ 20 အချက်များ, နောက် ... ပြီးတော့။
အတု Mahjong (အတုဟူ)
ကစားသမားရှိပါတယ်လျှင် ထက်နည်း 8 မှတ် ပေးဆောင်ရမည် 10 အချက်များ တစ်ခုချင်းစီကိုကစားသမားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် သေပြီသူသည်ကစားနိုင်သော်လည်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူနိုင်သည်။
ကစားသမားပါလျှင် လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါ Mahjong ကိုစွန့်ပစ်ရန်ပြုလုပ်ရန် (သင့်တွင် tile ၁၄ ခုထက်ပိုသောသို့မဟုတ် ၁၄ ထက်နည်းသော၊ အပိတ် tile နှင့်စသည်ဖြင့်) စသည်တို့ကိုသင်ပေးရမည် 20 အချက်များ တစ်ခုချင်းစီကိုကစားသမားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် သေပြီသူသည်ကစားနိုင်သော်လည်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်အားလုံး ပြထားတဲ့ချစ်ပ်များ မှားယွင်းသော Mahjong ၏ကြေငြာခြင်းအားဖြင့် စွန့်ပစ်ရမည်ဖြစ်သည် အောက်ပါကစားသမားအတွက်လှည့်။
အားလုံး tab ကိုပြ ကစားသမားတစ် ဦး မှ (သူသည်၎င်းကိုနံရံမှခိုးယူသောအခါ၊ လက်ထဲရှိချစ်ပ်များအကြားပစ်ချခြင်းစသည်) စွန့်ပစ်ရမည်ဖြစ်သည် ကစားသမားရဲ့နောက်အလှည့်တွင်။
ဖြစ်ရပ်မှာကစားသမားတစ် ဦး သင်၏ချစ်ပ်များအားလုံးကိုပြသပါ အခြားကစားသမားတစ် ဦး က Mahjong အားကြေငြာသောအခါသူသည်အမှားကျူးလွန်နေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် Mahjong ကြေငြာသူကစားသမား အနိုင်ရ, မိမိချစ်ပ်ကိုပြသသူကစားသမားဖြစ်လိမ့်မည် အကြံပေးခဲ့သည်.¿ တစ်ခြားကစားသမားအနိုင်ရမလား? ပြထားတဲ့ချစ်ပ်ပစ်ရမည်ဖြစ်သည် တစ် ဦး တည်း
ကစားသူတစ်ဦးပါလျှင် အခြားရဲ့ဖိုင်ကိုထုတ်ဖော်ပြသ, သင်ဒဏ်ရာရကစားသမားအကြားပေးဆောင်ရပါမည် 5-60 မှတ် ဒိုင်လူကြီး (ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည့်သူ) (မည်သူသည်ဂိမ်းကိုဆက်လုပ်မည်၊ မသွားမည်ကိုဆုံးဖြတ်မည်) ဖြစ်သည်။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်အလှည့်အကြား ၁၃ ခုထက်နည်းသော ၁၃ ခုထက်ပိုသောသူရှိလျှင်၊ သေပြီသူသည်ကစားနိုင်သော်လည်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူနိုင်သည်။